यी ५ युवती मध्ये कुन युवती मनपर्यो ? एक रोज्नुस् अनि थाहा पाउनुस् आफ्नो व्यक्तित्व ! -
यदि तपाईलाई व्यक्तिको खुबी सधैँ एउटै हुन्छ भन्ने लाग्छ भने तपाई यसबारेमा कम जानकार हुनुहुन्छ । वास्तवमा हाम्रो मानसिक स्थिति कस्तो छ यसले हाम्रो व्यक्तित्वमा केहि हदसम्म प्रभावित गर्छ । त्यसैले जब कहिले तपाईको अगाडी कोहि व्यक्तित्व परीक्षण गर्न आयो र तपाईले जवाफ दिनुपर्यो भने तपाईलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि तपाईले मात्र आफ्नो वर्तमानको कुरा मात्र भनिरहनु भएको छ ।
अब तपाईको अगाडी यो पाँच तस्विर छ जुनमा तिनीहरुको पछाडीको भाग देखिएको छ । अब तपाईलाई थाहा छैन कि यी युवतीले फर्किन्छ कि फर्किदैन। यी मध्ये सबैभन्दा आकर्षक को होला। यो त तपाईलाई नै थाहा होला।
यदि कसैलाई यो तस्विरमा रहेको युवति सबैभन्दा धेरै आकर्षित जस्तो लाग्छ भने यसको अर्थ यो हो कि तपाई निकै सामाजिक व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाई भित्र बचपना रहेको हुन्छ । तर तपाईलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि तपाई आफ्नो उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ । यस्ता मान्छेहरु प्राय राम्रो मूडमा हुन्छन् र कहिलेकाहिँ मूड खराब हुन्छ। तपाई हरेक स्थितिमा सकारात्मक रहने कोसिस गर्नुहुन्छ र नराम्रो घटनालाई मनमा राख्नु हुदैन।
← मलाई पुरुषको वि’र्य खान मन पर्छ, कुनै असर गर्छ कि गर्दैन ?पूरा हेरि बताउनु होस
यौ’न सम्पर्कपछि पुरुष किन निदाउँछन् ? एक पटक अबस्य पढ्नुहोस्… →